Cash vanozvishandisa ishiri Savacheche Small vasingazivi chakanaka yavo.
Four guru "cashless omugungwa" (Mastercard, Visa, American Express uye Diners Club) rave akabvumira kuwana unorema predominance kuWest wacho mari. Hakusi chete kontantlösheten pachayo kuti akaipa asiwo zvoupfumi ari shure ichi.
Ndichaita zvino kubudisa Cashless pakurangana "Cash Only" serialized pano musi Apg29. Bhuku rirege muBhaibheri uye kutenda kwechiKristu, asi zvinofadza zvikuru tichifunga yose upfumi nzanga kuzvidzora sezvo Zvakazarurwa 13 rinorondedzera.
Pano zvakaipa cashless mananara akadai makadhi, cashless Mobile kubhadhara uye mberi kune anodyara uye zvemagetsi nyora. Uchapupu hunoratidza kuti remangwana muviri pedyo zvemagetsi kuburikidza kuzivikanwa uye mashoko achashumira sezvo vose makadhi, mutyairi wacho marezinesi, mapasipoti, makadhi uye zvichingodaro. Mumwe asiri cashless chikumbiro kunorevawo izvozvo zvichida kuti inodzidzisa (kunze akaipa vose ichi zvemichina) kuti munguva yemberi anopinda cashless ngozi. Nokuda kwechikonzero ichi, bhuku anoedza kupa yakafara RUBATSIRO RUNOTARISA maonero muviri pedyo Electronics. Kontantlösheten ndivo musimboti chii inowanzodeedzwa guru mukoma vanhu.
Current zvakafanana cashless kubhadhara vari nehasha yakakamurwa chokuita kana makadhi, dzeserura kana Indaneti. Kazhinji ndiwo zvakaitika mubatanidzwa izvi. Runoenzanirana mabhanga ndiwo Internet mabhanga, mobile mabhanga nemabhangi runhare. Kushandiswa zvakawedzera pamusoro nemabhangi izvi akatora nekunyepedzera kuderedza mari. Kunyange zvimwe kuti ave kuda chechinyorwa ichi pane kontantlöshet kugadziriswa. Somuenzaniso, ATMs, mari, mari chokufambisa, mabhengi, uye vokupedzisira asi kwete zvinenge mari. Zvose zvinoenderana kureva pamwe chete. A-yakareba muitiro yave shoma uye shoma mari inobhadharwa cashless chisarudzo. Kubva cashless nemaonero, vaduku kubhadhara ave achilles chitsitsinho. Payment pakati vanhu (kufanana-kuti-vezera kubhadhara) Uyewo zvakawanda pamwe maserura uye nedzimwe nzira.
The kusimbiswa pano riri pamusoro US uye Sweden uyewo dzimwe nyika dzinoverengeka akafukidza mubhuku. Account Makadhi 'kunyanyisa negativity kunosimbiswa neUnited States ine zvokufananidzira makadhi kutonga kuMadokero. The National kadhi Makambani kunze United States (idzo uyewo zvakasimba kunaka) anoita kunyange wanyanya pavaizosvika kudya nechinhu American kadhi hofori. Izvi abereka kudyidzana uye vakauya nyika imwe nhano pedyo mumwe cashless muripo nevhu rakawandisa. Pano, Mastercard ane chinzvimbo chinokosha nokuti zvakananga kana kuti zvisina kunanga, wakaparadza zvose Eurocard (Sweden) uye Mondex (UK).
Bhuku iri muzvikamu uye zvimedu-siyana urefu uye vanogutsikana kupa muverengi kuchinja uye kwete kuneta kunyanyisa coherent rwezuva. Bhuku rinonzi alternates pakati mbiri huru tsvuku waya. Kukura cashless kwenzanga uye mauto kana vanhu, kunyanya Sweden uye US kuti zvakakanganisa cashless mirayiridzo kana takatarirana izvozvo. Izvi zvakasiyana nokutsoropodzwa, mazano kuti kurwisa uye nharo pamusoro cashless nzanga uye nharo kuti mari. Pane zvazvakanakira vane mari. Vanobvumira kusazivikanwa kutenga kuti dzisina traceable, hapana bato wechitatu rinobatanidzwa uye vanhu vanogona takasununguka uye pasina kuzvidzora kupa mari kune mumwe. Vanhu Vazhinji vakavimbika. Asi cashless pakagadzwa anozvidza wose sokunge vaiva vapari vemhosva.
Chokwadi chokuti voga yavatorwa cashless bhizimisi pehurumende uye maropafadzo zviremera vanofanira kubvumirwa kutsiva National hurumende mari mari chinokuvadzwa rwakatsauka. Munhu wese aifanira kuona upenzi uye ane ngozi kune zvose zvokudya uye simba kuti kubudiswa zvachose kunze Sweden, uye simba zvaizova kupa zvibereko kunyika. Asi kuramba kontantlöshet kuonekwa zvisizvo sezvinoita kukura utano. Izvi kunotsigirwa dzakawanda pakagadzwa. Zvakaipisisa kana zviri pamusoro chete zvibereko nyika. Achitaura kontantlöshet zvokuti apo Sweden rinonyanya kare muripo mazwi varanda muUnited States. Kuramba cashless globalizing muitiro kungabatsira nzira kuti nguva yemberi isina tariro zvinobvira.
The kunyanyisa mbishi nharo iri pasina kuenzanisa kupfuura hackneyed nharo kuti makadhi uye kontantlöshet. Wasangana muupenyu chaihwo uye kwete kufunga uye vanhu vakangwara anongoda ichi chimwe chenhema nharo nokuda rinogadzirirwa kubayira rusununguko rwake ramangwana achishandisa makadhi. Iri bhuku motargumenterar simba mbishi nharo. Cashless Ipfungwa anogara kusvibiswa mhosva kunze zvichida kwekanguva. Izvi kwakachena dongo uye rwevanodzvinyirira 'kunonoka ugororo "imwe mhando. Cash haana mari.
Cash iri pamutemo akasimba, zvinoda hapana hwokugadzira kwezvivako iri kurira decentralized uye rakachengeteka. The cashless hurongwa ndivo vanonyanyova. Kuvhura mari yemuraudzo kunofanira
vanongoita manomwe namakumi mashanu iwayo makwapa akasvibirika riri kumucheri wechitatu pfumbu masokisi imwe munhu uzvipise pamwe mudzanga vakareruka. Kontantlöshet Mibhedha nokuti pose mubhadharo njodzi. Kwakadaro hazvigoni kuitika pamwe mari. Cash chinhu vakachengeteka uye vakachengeteka.
The pakakurukurwa mari uye kontantlöshet muSweden zvikuru nokushapira kuti marapirwo iri mari. Achitsutsumwa pamusoro kontantlöshet uye mari iripo asi chaizvo kashoma kubva yevanhu uye mabhizimisi. Zvinoita sokuti mutemo aizofanira mumwe chete kusunga divi uye hapana kuzvidavirira. Muna dhoku agere mari. The chete kudzivirira iripo ndiko gweta racho bhegi amire kusuruvara uye akanyarara. Chero gweta anooneka Zvisinei kwete. Asi pamwe pane gweta duku nyaya. Zvichida iye haasi mukuru Teskedsgumman. Asi ngationei kuregedzera shoma gweta kuti anogona kudya guru uye rakasimba. Rega okutsutsumwa muSweden kuzorwa kontantlöshet kusimba.
Chimwe Kuenzanisa ndechokuti referendamu iri simba renyukireya vakanga chete anga nezvechisarudzo. kuwedzera Strong. Uyezve, vagari haabvumirwi kuvhota kunyange hungu kana kwete kuti ichi nekuti vanhu yakatotanga yakasarudza kuti simba renyukireya (verenga kontantlösheten) vachazopedzisira tora pamusoro vamwe simba zvose. Vanhu vane nyaya mari uye kontantlöshet hapana kutaura. Asi referendum aizova kana ichi ufuza. Haugoni kuvhota kumanikidza udzvinyiriri (zvachose kontantlöshet) kana kuramba gutsaruzhinji (mari). Udzvinyiriri hazvifaniri kusarudzwa.
Kana Soviet Union angadai akanga aida kuti nyika yechiKomonisiti. Zvakange nounyoro vasina chinhu United States uye vagari vemo vakanga akagamuchira. Haufaniri kumanikidza munyika enyika uye zvemari enyika. Zvino tsika. Asi kana US ari kuedza kumanikidza vamwe nyika ine cashless uye mari ichaita riri vairatidzira zvishomanana. Hapana musiyano chekuuya simba nyika communism. Kontantlösheten haasi pamusoro nokuva mapurasitiki kadhi iri chikwama chako. Iri izwi rinoreva chimwe chinhu chaitonyanya achinyengera uye yakadzama. Uyewo, US kontantlöshetens mambo genomruttne pasina chinhu zvakafanana muenzaniso munyika.
Banks översittaraktiga Mafungiro kakawanda kuti zviri pamusoro pakunamata kutanga kushandisa makadhi. Cash vanozvishandisa ishiri Savacheche Small vasingazivi chakanaka yavo. Pakupedzisira ripen vari Bank kwaiita uye anogona pachavo kushandisa potty, izvo rinoenderana kadhi rokubhengi. Facts uye pfungwa zvinoratidza pane kuti vanenge vakura uye nepfungwa kurwisa uye vanoramba kushandisa makadhi. Zvaringana ane chinokosha kuongorora uye zvishoma chokwadi achiunganidza kuziva kuti zvose nani pamusoro nemakaro uye ruvengo mabhanga '.
Kunyange vana vaduku chaizvo vane sarudzo. Vanogona kuzvisarudzira kana vachida kudya kana kwete kana zvokudya zvakapirwa. Sarudza kana vachida kutamba bhora kana rira. Asi Swedish vakura ndivo vanobvumirwa pakureba kwete kusarudza mari. The stroller iri kutoti akura murume ane makumbo wakafuka refu muchibudisira. Mubereki kontantlöse vakamirira pasina murefu pamusoro "mwana" kutanga kutamba naye dangling nechitoyi zvinosanganisira rinoumba mashizha. The reza mashizha ndivo makadhi chikwereti.
Munguva kubvira 50 remakore 80 remakore, Sweden achiri Sweden pasinei yaiva pasocial democratic kana mugovanisi hurumende kuti vakatonga. Nyika ichiri azadzwa zvakanaka, kuchengeteka, kwavakarerekera uye rusununguko. Zvadaro zvose atanga kuipa. Independence akanyangarika zvakawanda, kwete kunyange nemashoko zvemari. The tichivenga pose vakauyawo nyika yedu ive yakasimba ichidzora. Upfumi akatowedzera cashless.
Riksbank akarumbidza privatization muitiro asi chete kwakaguma njodzi akafanana Panaxia wokupomera uye neherikoputa ugororo. Tangai nokuti kubhengi-vaiva mari zvakanaka chockhöjdes. Pane kudaro penga inowedzerawo 1200 muzana. Banks ndichingotsutsumwa kwazvo pamusoro zvinodhura
utariri kunyange ivo pachavo vari zvisinganyanyi mhosva. Panguva ino, akava bhengi matavi cashless mune inotyisa kumhanya. The zvokutengeserana uye pemahombekombe vari pakunyunyuta kwazvo sei zvinodhura mari kubhadhara kana chokwadi, isu vatengi kuburikidza zveupfumi toppings kuripa ichi.
Mupendero avgrundsdjupets pasi kwakaitika muna kwemubatanidzwa hurumende. Cash Kutarisira vakauraya zvinenge zvakakwana paaritari privatization. Sezvo zvishoma nezvishoma Sweden raramba Vaiisa pakudzika sludge kusvika zvachose cashless nenjodzi. Ongororo pasi mubatanidzwa hurumende kubatwa mari kutenderera chete uye kwete vanhu kodzero dhipoziti kwakadaro uye kutora mari iri mubhengi. Vamwe-yakareba sarudzo pakati mari uye makadhi hazvirevi sokuti kubvumirwa.
Zvakazoitwa tsvuku-nyoro hurumende akagamuchira vose zvakafanana kukokwa kuti nhaurirano kubva imwe huru vamiririri kutsoropodzwa zvinonyatsorehwa kontantlöshet. Mumwe mushumiri dzakakurukurwa rokukoka kumapati zvose vaifarira. nguva ino, kunyange kontantlöskritiska vamiririri vave vakachengeteka indasitiri kwakadaro uye yose Sweden anofanira kurarama. Zvakanga riksdagssak Mari. Asi urombo chero utano uye kuzvishandisa zvichachinja panyaya mari mutemo asingagoni kunzwisiswa. The dzataurwa mutsoropodzi kune zvachose kontantlöshet akaratidza mhinduro dambudziko apo anonyora kuti hurumende inofanira kutora shure basa nokuda mari.
Vamwe netsvakurudzo kuti vanhu vakawanda masere kubva gumi kuda mari utariri muitiro kuchawedzera. Banks vanoti musoro kudzivirira vatengi nokubvisa mari apo vatengi, akavapindurawo, anenge achikumbira kuti ave navo ikoko. Vanhu vakawanda havana nzira chaitadzisa cashless pakagadzwa kubva zvachose kubaya mari hurongwa. With cashless pokugadzwa aireva chikuru ari Riksbank, vatatu zvikuru mabhanga, kadhi makambani uye mukuru kwazvo kubatanidzwa mune zvematongerwo enyika, vemabhizimisi uye vezvenhau. Uyezve, vamwe vaimbova Pop chidhori. Achibatsirwa nhema, hafu-nhema uye okuwedzeredza zvakaita Swedish vanhu chokufambisa. Shure navo, pakati pezvimwe zvinhu, US mari nyika dzarwo guru uye echikwereti makambani.
Four guru "cashless omugungwa" (Mastercard, Visa, American Express uye Diners Club) rave akabvumira kuwana unorema predominance kuWest wacho mari. Hakusi chete kontantlösheten pachayo kuti akaipa asiwo zvoupfumi ari shure ichi. Mune dzimwe magariro evanhu uye nyika zhinji vanotarira kwairi sezvo chinhu chakanaka kuti upfumi vachamhanya kusingachadzoreki pasina kurambidzwa. It kunoonekwa utano kuzvidzora vedare hurongwa. Izvi zvinofanira nani angaenzaniswa vamwe kukurumbire junkie saka zvakaoma kuti dzimwe nguva teetering vatarisana norufu.
Zita rebhuku racho pasinei kwete pamusoro rangano zvokufungidzira. Kana uchida kuvandudza pachavo vari nezvedzidziso idzi rwizi mashoko kumwewo. Kungava nhema kutaura kuti bhuku iri chinangwa. Zviri kwazvo kuzviitira uye pachedu. It chinorehwa sezvo inopisa kudanwa kuti hondo pamusoro vanorwara mari ichaita apo kontantlösheten ndiwo. Chayo ari munzvimbo muno rakafara umbowo. Hazvina kururama kuedza kuwana zvikomborero chinhu chiri kuitwa asina kunaka. Bhuku rino iri kudanwa kubata rokupedzisira mashanga.
Pane zvikonzero zvakati kuti bhuku zvakavapo. Asi guru chikonzero uye uswa kuti akaputsa makushe musana rakanga kuti vakawanda mabhanga havachasungirwi vanobvumirwa mari mubhangi uye vaiva cashless. Kana vakawanda mabhanga achiri vakanga tive kutora mari iri mubhengi saka yakanga bhuku rino hauzoti. Zvave kunakidzwa uye rinogutsa kunyora bhuku. Asi mumwe ikurudziro zvikuru kunyora kwakawedzerwawo hasha uye nokukangaidzika pamusoro maitiro ane vainyengera uye kutsarukana cashless yokuitira. Munyori anoda kuti kuziviswa, uye vazhinji nharo afuridzire imwe aval nemishonga kontantlöshet kuSweden.
The cashless dzinokura zviitiko kubva mari anoenda saka kusimba kutsanya. Chete apera basa bhuku, zvinokosha zvichaitika kuti murege kuuya bhuku. Munyori zvikunguro pamusoro zvimwe zvinokosha zvichauya mubhuku rino. Asi mumwe anofanira kumisa kunyora panguva yakakodzera nguva. How kunakidza uye mubayiro kunyora bhuku, nekuti chinangwa kuti vakawanda sevanobvira kuriverenga.
Bhuku rakapera pakutanga kwezana 2015/16. Rakanyorwa nemufaro kumwe kuSweden. Bhuku iri chakatsaurirwa vana vose Swedish kunatsiridza upenyu isu vakuru. Hazvina kunyorwa nokuda vana kuriverenga, asi kuita chimwe chinhu kuti vane ramangwana sevanhu vakasununguka kwenguva yakareba sezvingabvira.
Vecka 30, söndag 1 augusti 2021 kl. 09:36